Tsy amin'ny fisehoana araka izao tontolo izao
“Mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendrennt' olona, fa amin'ny herinAndriamanitra ihany.” - 1 Kôr 2:5.
Notendrena hamita ny asany i Jesôsy (...) tsy amin'ny fisehoana sy ny fihetsehana ivelany, fa amin'ny firesahana amin'ny fon'olombe­lona amin'ny alalan'ny fiainana feno famindrampo sy fandavan-tena.
Tokony ho fahazavan'izao tontolo izao ny mpanaraka an'i Kristy; nefa tsy mibaiko azy Andriama­nitra hanao fiezahana hamirapira­tany. Tsy ankasitrahany ny fieza­hana rehetra asesiky ny fitiavan-­kiseho ho tia vavaka mihoatra noho ny hafa. Iriny ny hahavonto ny fanahy amin'ny foto-kevitry lanitra; amin'izay, rehefa mifampikasoka amin'izao tontolo izao izy, dia hampi­seho ny fahazavana izay ao aminy. Ny toetra mahatoky tsy azo hozongo­zonina hita eo amin'ny fihetsiny rehetra eo amin'ny fiainany dia ho fitaovana hanazavana ny hafa (…)
Ny fisehoana araka izao tontolo izao, na igagana toa inona aza, dia tsy misy vidiny eo imason'Andria­manitra. Mihoatra noho ny hita sy ny ara-nofo no anombanany ny tsy hita maso sy ny mandrakizay. Tsy misy antony irery voalohany raha tsy miseho ireto manaraka. Ny zava­kanto mendrika indrindra dia tsy manana hatsaran-tarehy izay azo oharina amin'ny hatsaran-toetra amam-panahy, izay vokatry ny asan' ny Fanahy Marina ao, amin'ny fanahy (...)
Ny zotom-po vokatry ny fanoloran­tenan’ny rnpiasa -satria maneho ny herin’ny fahasoa­van'i Kristy manova fiainana - no fatran'ny fahombiazan'ny ezaka ataon'olombelona ao amin'Andria­manitra. Tokony hiavaka amin'izao tontolo izao isika satria efa name­traka ny tombo-kaseny tamintsika Andriamanitra, satria nasehony amintsika ny toetra amam-panahiny feno fitiavana. Manarona antsika amin'ny fahamarinany ny Mpana­votra antsika.
Raha nifidy lehilahy sy vehivavy hanompo Azy Andriamanitra, dia tsy mijery na manana harena eto amin'izao tontolo izao izy na tsia, na nahita fianarana, na mahay mandaha-teny na tsia. Manontany Izy hoe : "Moa ve manana fanetren­-tena ampy izy ka azoko ampiana­rina ny lalako? Azoko atao, eo am­bavany va ny teniko? Moa va hampiseho Ahy izy?" Azon’Andria­manitra ampiasaina ny olona. rehetra arakaraka ny ahazoany mame­traka ny Fanahiny ao, amin'ny tempolin'ny fanahy. Ny asa izay mampitaratra ny endriny no asa ekeny. Ny taratasim-pahefana asehon'ireo mpanaraka Azy amin' izao tontolo izao dia ireo toetra mampiavaka tsy azo kosehina sy tsy manam-piovana avy amin' Andriamanitra.[...]